हाम्रा नेताको चेतना खुल्ने कहिले ?
गृहपृष्ठ विचार/ ब्लग हाम्रा नेताको चेतना खुल्ने कहिले ?
हामीले राजतन्त्र भोगेकै हौँ । बहुदलपछि पनि शेरबहादुरले नै राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता सुम्पिदिएकै हो । राजाको शासनकालमा पनि धूर्त ब्वाँसा फटाहाकै हालीमुहाली चलाएका हुन् । आज फेरि देशमा राजनीतिक अराजक उत्पन्न भएको छ । व्यक्ति परिवर्तनका लागि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने दाउ चलाइरहेका छन् ।
‘नारायणगोपाल’ यो नाम हो, जसको अगाडि पछाडि गायक, संगीतकारको ट्याग भिडाउनु आवश्यक छैन । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा नारायणगोपाल स्वरसम्राट हुन् ।
मानिस जतिसुकै उचाइमा पुगोस्, उसले आफ्नो धरातल बिर्सनु हुँदैन । आफ्नो समाज रीतिरिवाज भाषा, धर्म–संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सक्नुपर्छ ।
नारायणगोपालले आफ्नो जीवनको अन्तमा एउटा कुरा महसुस गरे । संसारमा जति ख्याति कमाए पनि आफ्नो जात–धर्म र भाषिक क्षेत्रमा केही योगदान दिन सकेन भने आत्मगौरव हुन आफू सन्तुष्टि रहन सकिँदैन ।
काठमाडौंको नेवार परिवारमा जन्मेका जन्मिनुभएका नारायणगोपालले कहिल्यै आफ्नो मातृभाषामा नेवारी गीत गाएन । स्वर्णिम सन्ध्याको सांगीतिक ऐतिहासिक कार्यक्रममा असनवासी नेवारी समुदायका मानिसले टिकट नै किनेनन् । यसर्थमा उक्त कार्यक्रमको बहिष्कार गरे ।
नारायणगोपालको एकल स्वर्णिम सन्ध्या कार्यक्रम भिडियो रेकर्डिङ गरियो । नारायणगोपालले आफ्नो जीवनको अन्तरालमा आफ्नो पूरा नाम नारायणगोपाल गुरुवाचार्य लेखे ।
यो पनि पढ्नुहोस.. संकटमा रेडियोको प्रभावकारिता
यो भयो, गीत संगीत गायकको कुरा, अब देशको कुरा गरौँ । भनिन्छ, नेपालमा शाह वंशीय राजाहरूले झन्डै २४ वर्ष शासन गरे । पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षे कार्य अवधिलाई पनि राजतन्त्रअन्तर्गत जोडिन्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा राष्ट्रिय झन्डा बोकेर नेपालीले निर्णायक आन्दोलन गरे ।
संयुक्त पार्टी भएर शीर्ष नेताहरूको अगुवाइमा व्यवस्था फेरे । राजा हटाए । लोकतन्त्र, जनतन्त्र भन्दै गणतन्त्र स्थापना गरे । राजालाई सत्ताच्युत गरे । उपलब्धि के रह्यो ?
आज फेरि जिन्दावाद र मुर्दावादमा देश भक्ति नारा गुन्जिन थालेको छ । नेपाली झन्डा बोकेर जिल्लाजिल्ला सहर बजारमा सत्ता, शासक, नेता र गणतन्त्र व्यवस्थाको विरोध हुन थालेको छ । राष्ट्रियताको आवाजका नारा घन्काउँदै नेपाली झन्डा बोकेर ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्न थालेका छन्, किन ?
देश परिवर्तनको नाममा व्यक्ति र सत्ता परिवर्तनका लागि व्यवस्था फेर्दैमा देश विकास हुने होइन । देशका लागि अगुवाइ गर्ने व्यक्तिमा राष्ट्रिय एकताको भावना र देशलाई माया गर्ने हुनुपर्छ । अहिलेका सत्ता भोगी नेताहरूले देश प्रेम नारा पटकपटक नलगाएको पक्कै होइन ।
यो पनि पढ्नुहोस.. विद्यालयलाई सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन : निर्देशक घिमिरे
उनीहरुले वीर सहिद गंगालाल, धर्मभक्त, दशरथचन्द्र र शुक्रराज शास्त्रीले जस्तो देशका लागि बलिदान गर्ने वाचा पनि गरेका हुन् । सत्तामा पुगेर किन पटकपटक चुकेका छन्, हाम्रा नेताहरू ! शासकहरुमा भनाइ र गराइमा किन फरक हुन्छ ?
ज्यानको बाजी लगाएर जनयुद्धबाट देशलाई अग्रगामी छलाङ मार्ने भन्ने नेताहरु किन सत्तामुखी भएर आफ्नो स्वार्थमा सीमित रहेँ । महान् नेता बिपी कोइराला भनेर कांग्रेसको अगुवाइ गर्नेले सरकारमा पुगेर देशको भौतिक सम्पत्ति कलकारखाना बेचेर ब्रह्मलुट गरे ।
वामपन्थी आन्दोलन भनेर देश विदेशका नेता लेनिनवाद र माओत्सेतुङको नामबाट जनतालाई उचाल्नेहरू व्यक्ति स्वार्थमा सत्तामा पुगेँ र पद र पावरका लागि आफूआफू बीच कोलाहल मच्चाउन थाले आखिर जनताहरूले गरेको आन्दोलनको उपलब्धि के हो ?
राष्ट्रियता र देशको सार्वभौम सत्ता सिमाना कायम राख्न असफल नेताहरूले राष्ट्रको गौरव, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय झन्डा, धर्म–संस्कृतिको अवमूल्यन गर्दै लगेकाले आजको अवस्था आइपरेको हो । किन देश र जनताको बारेमा हाम्रा नेता एक हुन सक्दैनन् । किन एकले अर्कोलाई औँला तेर्साएर आफू चोखिन खोज्छन् ! आम नेपालीहरूले देशको अवस्था राजनीतिक खिचातानीबाट जनताहरू वाक्क भइसकेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस.. एसिड अपराध र प्रेम
के देशमा सधैँ आन्दोलन अराजक अवस्था सधैँ यसरी नै चलिरहने हो ! किन राष्ट्रियताको सवालमा एक ठाउँमा उभिएर देशको समस्या हल गर्न सक्दैनन् ?
सधैँ अन्योल अराजकताको भुमरीमा देश र जनतालाई रुमल्याई सधैँ देश र जनताका नाममा आन्दोलन गराएर नथाक्ने अवसरवादी नेताको पछाडि जनताको भिड लागिहन्छ, तबसम्म देशमा कुनै नौलो परिवर्तन आउने छैन । देश र राष्ट्रियता जोगाउन नसक्ने नेता, शासक, राजा जो भए पनि तिनीहरू दण्डित हुनुपर्दछ ।
सत्ता गुमेपछि मात्र देशको सार्वभौमसत्ता, सिमाना, राष्ट्रप्रेमको कुरा उठाउने अवसरवादीहरू पटकपटक जुर्मुराउने गर्छन् । नेपाली जनताले कहिलेसम्म कसकसलाई साथ दिइरहने !
बारम्बार एकले अर्कोलाई असफल र असक्षम प्रधानमन्त्री भनेर पदका लागि पार्टी चलखेलको राजनीतिक खिचातानी गर्ने वातावरणको अन्त्य होस् । हाम्रा नेताहरूले देश र जनताका लागि स्वार्थ त्यागेर सबै पार्टी नेता एक भएर काम गरी देखाउने कहिले ? हाम्रा नेताको चेतना खुल्ने कहिले ?
साताको पहिलो दिनमै झण्डै २७ अंकले घट्याे नेप्से परिसूचक